Iindaba ze-HEXAGON 2019-Geofumadas
NgoJuni, 2019 Geospatial - GIS, GPS / Izixhobo, ezintsha
I-hexagon yamemezela ubuchwepheshe obutsha kwaye yaqaphela ukuveliswa kwabasebenzisi bayo kwi-HxGN LIVE 2019, inkomfa yehlabathi jikelele yezombululo zedijithali. Le ngqungquthela yezisombululo eziqingqiweyo kwi-Hexagon AB, ezinomdla othakazelisayo kwizixhobo, i-software kunye nokuzimela kwezobuchwepheshe, zaququzelela inkomfa yezobuchwepheshe beentsuku ezine kwi-Venetian eLas Vegas, eNevada, eU.SA. UU HxGN LIVE apho waqokelela amawaka abantu abathengi baseHexagon, amaqabane kunye neengcali zeteknoloji ezivela kwihlabathi jikelele.
Isiganeko saqala ngethuba lobuchule Ola Rollén, UMongameli kunye ne-CEO ye-Hexagon, enesihloko esithi "Idatha yakho ingawusindisa umhlaba."
"I-Hexagon inombono onamandla wokufaka idatha kwaye iguqule imeko yokupheliswa kwezixhobo kunye nenkcitho yomhlaba," utshilo uRollén. «Ngokuxhobisa ikamva elizimeleyo, inkqubo yethu" yokwenza okuhle "iya kuqhuba uzinzo ngokunyuka okusebenzayo, ukhuseleko, ukuphuculwa kwemveliso kunye nenkunkuma encinci, iziphumo ezifanayo zeshishini njengabathengi bethu ukukhangela ».
Iinqununu zeeyunithi zee-Hexagon zorhwebo zazisa iimveliso zeteknoloji entsha kunye nemibutho yezoshishino ngexesha leentetho eziphambili kwi-12 ngoJuni. Ngexesha lomcimbi, abaphumeleleyo bamabhaso alo nyaka, babonakalisa umoya wokwenza izinto ezintsha, ubambiswano kunye nenkqubela phambili kwezobuchwepheshe ngokusebenzisa impembelelo kumashishini abo, amashishini abawasebenzisayo kunye noluntu lwasekhaya noluntu jikelele.
Ngalesi sihlandlo bahlonishwa kunye nokulungiswa kwabo:
Apex.AI: Ukwandiswa kweteknoloji yezithuthi ezizimeleyo. Ukufumana iimarike ezithe tye, ezifana nokwakhiwa, ukuvelisa kunye nokunye.
Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC): Basebenzela ukudala inkqubo enobulumko yokuvelisa imoto.
Bombardier Aerospace: Ukusetyenziswa kwamagqabantshintshintshi asebenzayo, avumelekileyo ukuba aqinisekise izixhobo ngokubhekiselele kwimimandla ebalulekileyo yokuthobela
I-Canada Natural Resources Limited: Iiprojekthi zenkxaso eziphuhlisa umgangatho wobomi kunye nempilo yezoqoqosho kwimimandla esisebenza kuyo
Censeo: Sebenzisa i-georadar ukudala iindlela zokuhlola ezingaphantsi
Corbins Umbane: Yakha uphinde wabelane ngeendlela ezintsha zeendlela ezintsha, kungekuphela kwenkampani kodwa kwishishini lonke
CP Police Service: Baqinisekisa enye yeendlela ezihamba phambili ezona zikhuselekileyo ezisebenza kakuhle eNyakatho Melika.
Frequentis: Yakha isisombululo sokwenza ulwazi oluneendawo ezikhoyo kuyo yonke imibutho
Fresnillo: Bakha ipolfoliyo edibeneyo yokucwangcisa kwam, imisebenzi, ishishini, uphando kunye nokuhlola iliso.
"Abathengi bethu ziiarhente zotshintsho nokunyanzela abaphindaphindayo, kwaye sonwabile ukubhiyozela imbeko yalo nyaka ngegalelo labo," utshilo uRollén. "Amabali abo ayakhuthaza kwaye asikhuthaze sonke kwiHexagon."
I-FTI izisa ukuqaliswa kwe-FormingSuite 2019 Feature Pack 1
Technologies Ndiyila (FTI), ezi zikhokelela izisombululo mboni uyilo, yokulinganisa, ucwangciso kunye neendleko sheet components metal developer, wavakalisa ukusungulwa ehlabathini FormingSuite 2019 1 Faka Pack. Eyenzelwe estimators iindleko, iinjineli uyilo, isixhobo abayili neenjineli Advanced uceba kwi, aerospace, iimveliso yabathengi elishishina ngezithuthi kwaye elektroniki, kulo mqulu phawu iye uphuculo ezininzi akuqinisekisi arcade games kweziphumo kunye nokusebenza bonke abasebenzisi.
Utshintsho oluqhelekileyo kwiibhanki zokusebenza kunye neenkqubo zeekhompyutha zivumela ukuba iingcamango zokusetyenziswa kwezinto eziphathekayo (MUL) kunye neNdizayini yokuThengisa (DFM) zizaliswe ngokupheleleyo. La magama ukunceda abathengi ukunciphisa inkunkuma izinto ngokusebenzisa iimvavanyo virtual ukubuyisela uvavanyo zamanzi formability nokusombulula iingxaki Wayemsongela ingqibelelo isijungqe elide phambi kokuba isithuba ifikelela emgangathweni. Iinkqubo ezintsha ukungafihli kwisofthiwe esivumela amaqela ukuba adle kwaye adala ngokukhawuleza, kwaye inkunkuma encinci kunaphambili, xa eqwalasela izinto ezininzi kwinkqubo yokumisa. Utshintsho kwiimbobo zokuhlola kunye neempawu zesihlomelo zidibanisa iisombululo zehlabathi zangempela kwinkqubo yedijithali, okuvumela ukuba iindawo ezichanekileyo kunye nokusebenza ngokuthe tye.
Ngolu hlobo lwakutshanje, inyulo yeProgramPlanner yeFormingSuite iyaqhubeka yokongeza inkxaso kwiinkqubo ezizodwa kwiinkalo zetsimbi. Workbench Isicwangciso seNdifa ngoku ivumela abasebenzisi ukuba baxele iinkqubo zokususa kwimisebenzi emininzi (kokubili kwi-intanethi nakwi-intanethi). Lo mandla omtsha uphucula inkcazo ebonakalayo yenkqubo yokunciphisa, kunye nomthwalo we-matrix, ixabiso le-matrix, ubukhulu be-matrix kunye nokubala kobunzima bomthamo. Izinketho ezintsha zokubala iindleko zekham zonyusa ukuguquguquka, ukubonelela ngokuqikelelwa ngakumbi kweekhamera ezizimeleyo, kunye nemigangatho yamatrices okuqhubekayo kunye neematri. Ukujikeleza utshintsho kule tafile yomsebenzi, ukhetho olutsha kwenkqubo yesishwankathelo seprogDie Inkqubo ibonisa ubukhulu bokufa kunye nokubekwa kwenkqubo.
I-module ye-COSTOPTIMIZER ngoku iveza ukuphucula okukhulu kwisantya sesisombululo esinyaniweyo, kunye neendlela ezimbini zokubonisa iimpawu zokubonisa imeko yomthengisi kunye ne-3D inxalenye kunye noyilo. Ukulungiswa kweendleko zokuyila iindawo zokuthenga izitya ngoku ngokuvumela abasebenzisi ukuba bakhethe ukuba iqela lihlanjululwe ngelixa ligcina isinxephezelo somvuzo, okanye ukuba isithasiselo sinqunywe ngaphandle kokuchaphazela inxalenye. Olu tshintsho, lunikezela abasebenzisi izixhobo eziyimfuneko ukuvavanya ngempumelelo amathuba okugcina amanani kwizinto eziqulunqwe kwisihlomelo. Ukwandisa ubuchule obuhlukile be-FormingSuite ukuzisa nokuvavanya i-geometry yenethiwekhi kunye nenkxaso; Isixhobo sokungena kwi-drift ngoku kunika ukhetho lokufakela izinto ezizungezile kwiimbobo zokulinganisa, njengokuba ziqhelekileyo kwiimpawu zehlabathi zangempela. Oku kuvumela iinjineli ukuba ziqinisekise ukuthembeka kwemida yazo yohlubo kwi-software nakwiindibano.
Ekugqibeleni, ukuhlaziywa okubalulekileyo kuye kwenzelwa ukunciphisa ngokukhawuleza. Ukucocwa ngokuzenzekelayo kwendwangu ngexesha lokulungisa kuqinisekisa ukuba iziphumo zokusebenza ngokucoca zichanileyo. Ukuqhayisa ngokuzenzekelayo ngoku kunika iisombululo ngokukhawuleza kunye neziphumo ezichanekileyo.
"Sivuya kakhulu ukubhengeza ukukhululwa kwethu okwangoku kwi-HxGN LIVE 2019, kugxilwe kulo nyaka ekugcinweni kwedatha," utsho uMichael Gallagher, umphathi kunye nomongameli we-FTI. "Omnye wemigaqo ephambili yesoftware yethu kukwandisa ukusetyenziswa kwezixhobo, ezingagcini ngokugcina abathengi bethu izigidi zeedola, kodwa sisebenzisa nedatha ukunciphisa inkunkuma nokwenza inkqubo yokutywina ihlale ngokuzinzileyo."
I-FormingSuite 2019 Pack Pack 1 ifumaneka kubaxhasi kwiwebhusayithi ye-FTI forming.com.
I-Aspen Technology kunye neHexagon Ivakalisa ukusebenzisana okutsha ukukhawuleza ukuguqulwa kweDivigual Digital Process Process
Iinkampani zinokukhawulezisa ukutshintshwa kwimiqulu-based based workflows, ukuphucula kokubili umveliso kunye nemigangatho yeziphumo kuwo wonke umjikelezo wobomi.
Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN), lo ifoun asethi inkampani software, kunye Hexagon wabhengeza kwinqanaba entsha wentsebenziswano ngokusekelwe Memorandum of Understanding (Understanding) ukulungelelanisa ngokusondeleyo kakhulu izisombululo zibiza uqikelelo, ubunjineli esisiseko AspenTech kunye suite sengqiqo kunye yobunjineli eneenkcukacha Hexagon PPM, ukuba ukuvumela ukuhamba swi ngokupheleleyo kwidatha lonke kwempilo-asethi.
AspenTech ne ntandathu PPM Masimanyane ngowokuqala kukuthengisa inkqubo yoyilo kunye nobunjineli yedijithali ngokupheleleyo yovavanyo ehlanganisiweyo kwezoqoqosho ukunceda abathengi ukulawula ngcono imingcipheko mali kwiiprojekthi ezinzima, nto leyo ngumngeni omkhulu namhlanje. Ubuchule obudibeneyo bunokukhawulezisa utshintsho lwezedijithali kwaye lukwazi ukwenza ukuphunyezwa kwezicombululo ezifanelekileyo kakhulu ezivela kubathengisi be-software abahamba phambili.
Ngokusebenza kunye, AspenTech kunye Hexagon PPM Unganikezela twin epheleleyo ngakumbi digital, kubandakanya iziseko izityalo kunye neenkqubo imichiza zisenzeka ngaphakathi ukuba iziseko ezingundoqo kwezolwakhiwo, ukuba bakwazi ukwenza izigqibo ezingcono ukuba nkulu intsebenzo, umgangatho kunye nexesha lomsebenzi. ucwangciso Software, iinkqubo kunye nokuthembeka AspenTech, kunye namava Hexagon PPM kwisigaba loyilo zobunjineli eneenkcukacha izibonelelo kunye nezityalo, kuya kunceda bakwazi ukulisebenzisa lula ngakumbi imifuziselo zobunjineli ngexesha lomsebenzi, ukukhulisa babuyele ekutyalweni kwabo kwaye bavumele ukuba baphendule bhetele kwiimeko zemarike.
Isibhengezo safika ngexesha lokuvula intetho yeSihlalo we-Hexagon PPM, uMattias Stenberg, HxGN LIVE I-2019 eLas Vegas, inkomfa yenkampu yedijithali yonyaka ye-digital, apho uAntonio Pietri, umongameli kunye ne-CEO ye-Aspen Technology yajoyina isigaba.
UPietri uthe: "Le ntsebenziswano iya kuvumela abathengi ukuba babe lula ukukhetha kwizisombululo kubathengisi abakhokelela kwimarike kulo lonke ixesha lokuphila, ukusuka kwinqanaba lokuyila ukuya kwiinkqubo ezisebenza kunye nokugcina isityalo. "Ubunjineli, ukuthengisa kunye nokwakha (i-EPC) iifemu kunye nabanini bamashishini ziya kuba nakho ukukhawulezisa inguqu yabo yedijithali ngokuzithemba okuqinisekileyo, bexhaswa zizisombululo ezilungileyo kwiklasi yabo."
UStenberg uthe: "Ngokusekwe kuvavanyo lwethu kunye nokuzibophelela kwethu nabathengi abahlangeneyo, siqinisekile ukuba kukhona ukubanempembelelo ekusebenzeni kunye nasekusebenzeni kweprojekthi. Ukulungelelanisa iindleko zeprojekthi kunye nezigqibo ekuqaleni kwenkqubo yoyilo kunciphisa uhlahlo-lwabiwo mali kunye nomngcipheko wenkqubo. "Emva kweprojekthi, ukudityaniswa kolondolozo kunye nolawulo oluphambili nezisombululo zethu zolawulo lolwazi ziguqulela kwizityalo ezikumgangatho ophezulu eziza kwenza ngcono kubo bonke ubomi bazo."
Abaxhasi sele bexhasa eli phulo elitsha:
"U-Eni ujonge phambili kumanyathelo afana nala aphakathi kweHexagon PPM ne-AspenTech," utshilo u-Arturo Bellezza, umphathi weenjineli e-Eni. «Ukudibana ngokuthe ngqo phakathi kokulinganisa kweenkqubo, imodeli ye-3D kunye nokusebenza kuya kuvumela inkqubela phambili enkulu kuhambo lwedijithali lomzi mveliso wethu».
I-hexagon ivula i-portfolio ye-OnCall i-HxGN ukuze ihlolisise ukubeka iliso nokuphendula koluntu
I hexagon iqalile HxGN OnCall, iphothifoliyo yoluntu olubanzi kunye nolwanamhlanje oluthatha inzuzo yokuhlalutya kwedatha yangempela ukuphucula ulwazi lokusebenza, ukwandisa ukusebenza kakuhle nokuphucula izixhobo.
OnCall HxGN Ipotifoliyo iquka iisethi ezine iimveliso eziku aokusetyenziswa kunye okanye ngokuzimeleyo: Office, Uhlahlelo, kunye noCwangciso neeRekhodi Impendulo. Ngokubambisana, iphothifoliyo inika umthombo wodwa wenyaniso ukwenzela ukuphendula ngokukhawuleza kunye nokuqinisekisa izixeko ezikhuselekileyo. HxGN OnCall ngumqulu kuphela ngokupheleleyo ukhuseleko loluntu lwauyila kunye nobuchule ithambeka kuwo onke amanqanaba eenkonzo zikaxakeka kunye ukusebenza isikali: amapolisa, umlilo, EMS, ukhuseleko yoluntu, abaqhubi zezixhobo ezikhulu, umda kunye nezithethe, uncedo esecaleni kunye nokunye
"I-Hexagon ibumba ikamva lokhuseleko loluntu ngokuvumela iiarhente ukuba zisebenze ngakumbi kwaye ziphendule," utshilo. Ola Rollén, UMongameli kunye ne-CEO ye-Hexagon. "I-HxGN OnCall ibeka idatha ekusebenzeni ukubonelela ngoxhumano, intsebenziswano kunye nobukrelekrele kwizixeko ezikhuselekileyo nezomeleleyo."
Amandla ayo okuphunyezwa kwiindawo kunye nakwifu, evumela ukuba i-arhente yobukhulu becala iqulethe iziganeko, phucule iziphumo kwaye unciphise ingozi ngokukhawuleza. Ukwakhiwa phantse malunga nama-30 eminyaka ngamava aqhuba phambili kwi-industry, i-HxGN OnCall ifaka i-IOT, ukuhamba, i-analytics kunye nefu ukuzisa isizukulwana esilandelayo sesisombululo sokhuseleko loluntu kwi-arhente ehlabathini lonke. Ubuchule bayo buxhasa idatha engenayo ngaphandle kweefowuni zefowuni, kuquka i-SMS, umyalezo osheshayo kunye nevidiyo, ukuqinisekisa ukuba abemi bafikelele kumagunya abo basekuhlaleni ukuba banike ulwazi oluza kusindisa ubomi babo kuzo zonke iziteshi zokuxhumana ezikhoyo.
Ulwahlulo lwe-geospatial lweHexagon luqalisa uLuciad V2019
I-Hexagon Geospatial Division yaqalisa uLuciad V2019 kwi-HxGN LIVE 2019, i-Hexagon digital solutions solutions.
Ngeliphothifoliyo yayo yeLuciad, iHexagon inikezela ngamacandelo e-state-of-art ukufumana ulwazi malunga nale meko kunye nendawo eneengqiqo ngexesha langempela. Ukuqaliswa kukaLuciad kwi-2019 ijolise ukuphula ii-silos zedatha, ukukunceda imibutho, izixeko kunye namazwe ukuba aqonde ngakumbi ukudibanisa okuqhuba ihlabathi lanamhlanje nokuchaphazela utshintsho olwenzeka kuzo.
"I-Luciad V2019 iya kuvumela imibutho efanelekileyo, indawo, izixeko kunye nezizwe, ukuba zisebenzise isisombululo esisemgangathweni njengendawo enobunkunkqele, kwaye zidale unxibelelwano oluyimfuneko lokuqhuba izigqibo ngexesha elifanelekileyo, utshilo uMladen Stojic, uMongameli weCandelo le-Geospatial ukusuka eHexagon. "Iqonga elinje, elisekuhlanganeni kweemfuno ze-geospatial, ukusebenza kunye nokubonakalayo, kubalulekile kwimibutho yehlabathi elawula ukugcwala kwedatha ye sensor ye-IoT, ekufuneka ibonwe ukuphucula impumelelo yokusebenza. Umyalezo ».
Ngokuxhaswa ngokuthe ngqo kweJavaFX, iqonga elisekuqaleni leLuciadLightspeed, livumela ukudala ukusebenzisana okusebenzayo komsebenzisi, ngelixa lisebenzisa i-GPU yokusebenza ngokupheleleyo. Bobabini uLuciadLightspeed kunye noLuciadFusion bayahambelana ne-OpenJDK, kunye ne-Oracle Java yangoku matshini. Abasebenzisi bangakwazi ukuphucula iinkonzo zedatha ngokuzenzekelayo nge-API ehamba phambili ye-API kwi-platform ye-LuciadFusion yiseva okanye ukuphuhlisa i-LuciadFusion Studio ngokwabo ngokwenza kube lula ukuphathwa kwedatha.
Version Luciad V2019 inikezela iimpawu nehlaziyiweyo mobile kunye bakhangeli zombini LuciadMobile ukuba LuciadRIA ukuba ziyahambelana neemfuno zamvanje zokhuselo eyama ukusuka joni wehla wocwangciso elibala ngelifu, kunye nemigangatho ezintsha , njenge-MS2525, iMGCP kunye ne-AIXM. Oku kwenza Luciad iiphothifoliyo imveliso kuphela kumsebenzi inika inkxaso symbology efanayo kuzo zonke iimveliso zayo.
Ukuqaliswa kuya kufaka umkhiqizo omtsha obizwa ngokuba yiLuciadCPillar, eyona mpendulo yeHexagon kwiimfuno ezikhulayo ze-desktop API ye-mission engundoqo kwi-C ++ / C # yoluntu.
Ukufumana ulwazi oluninzi malunga noLuciad V2019, tyelela https://www.hexagongeospatial.com/products/luciad-portfolio
Ulwahlulo lwe-geospatial lweHexagon lunikeza uMaApp Enterprise 2019
I-Geospatial Division yeHexagon, iqalise uMnuApp Enterprise 2019 kwi-HxGN LIVE 2019, inkomfa yesisombululo se-digital yeHexagon. Le nguqulo yakamuva ye-M.App Enterprise, idibanisa i-Hexagon ye-Luciad Portfolio ukuphucula ukuboniswa, ukuhlalutya kunye nokuphathwa kwedatha.
Abalungele asethi iliso, ukuvavanya utshintsho uthabathe iqonga isenzo M.App wamaShishini isisombululo labucala olwenza imibutho ukuba ngokwandisa Smart Hexagon M.Apps esimphendula iingxaki zabo ishishini dynamically ngokusekelwe indawo. nezici ezintsha M.App Enterprise 2019 ukubeka isiseko kubasebenzisi ukuba i smart digital 5D eneneni, apho data uxhulumeneyo kakuhle ngokusebenzisa ukuhlangabezana yehlabathi ngokwasemzimbeni kunye digital nobukrelekrele kuhlanganiswe kuzo zonke iinkqubo .
"Ishishini eliPhuculweyo leMultApp ngoku lisebenza ngetekhnoloji yethu yeLuciad, evumela abasebenzisi ukuba babenolwazi lwezinto zombini, xa kufikelelwa ekuboneni idatha kunye nohlalutyo lokunxibelelana ngolwazi ngaphandle kwexesha," utshilo uGeorg. Hammerer Umlawuli weTekhnoloji-Izicelo zecandelo le-Hexagon geospatial. "Eli liqonga lokudibanisa indibaniselwano yeshishini ngoku livumela abasebenzisi kunye namaqabane ukuba benze izisombululo ezithe nkqo kwiimarike zabo kunye necandelo lezorhwebo."
Ukuhlanganiswa kwe-Luciad Portfolio kuza kuvumela abasebenzisi ukuba baxhumane, bajonge kwaye bahlolisise i-vector kunye ne-data edibeneyo kwi-Smart M.App yabo kwi-3D. Ngoku ikwabonisa iziganeko zendawo ngendlela eyiyo, ngokusekelwe kwidatha yokuphakama kwendawo. Ukugubungela iindawo ezinkulu zeendawo kunye nesisombululo esiphezulu, uMa .App Enterprise 2019 uvumela abasebenzisi ukuba baxhumane neengxelo zokuphakama eziphezulu ze-mosaic ezinikezwa nguLuciadFusion. Ukongezelela, ukongezwa kohlengahlengiso kwi-Spatial Workshop yomsebenzisi idibanisa ivumela uMaApp Enterprise ukuba yenze ukufumanisa okukude kunye nokufunda komatshini -I-Learning Learning.
Ukufumana ulwazi oluninzi malunga noMnuApp Enterprise, tyelela https://www.hexagongeospatial.com/products/smart-mapp/mappenterprise.
I-hexagon izisa isisombululo sokufumanisa ukukhathala nokuphazamiseka kwabaqhubi bezithuthi ezilula
I-hexagon AB, echazwe I-HxGN MineProtect I-Operator Alertness I-Vehicle Light (i-OAS-LV), ukukhathala kunye nokuphazamiseka kweyunithi, eqhubekayo yokulawula ukuphawula komsebenzisi ngaphakathi kwekhampani yeemoto ezikhanyayo, ibhasi kunye neendlela zokuhamba.
OAS-LV Hexagon uyakhula Iphothifoliyo izisombululo zokhuseleko abashishini, ukugcwalisa umsantsa ukukhusela abaqhubi bezithuthi ukukhanya, siphephe ukuwela ubuthongo elityeni, zingqubane okanye nezinye ukudinwa okanye ukuphazamiseka izehlo ezinxulumeneyo. Imveliso isekelwe kwi-teknoloji esetyenziswe kuyo I-HxGN MineProtect I-Operator I-System yeZithuthi ezininzi (i-OAS-HV), okhusela abaqhubi beloli.
"Ukudinwa komqhubi kunye nokuphazamiseka kukuphindaphindana nomngcipheko kwimisebenzi enje ngemigodi kunye namanye amashishini, utshilo u-Ola Rollén, umongameli kunye ne-CEO ye-Hexagon. "I-OAS-LV longezelelo oluxabisekileyo kwipothifoliyo yethu ekhokelela kwimarike yokhuseleko lweM mineProtect kunye nobunye ubungqina bokuba i-Hexagon, njengabathengi bayo, ithatha ukhuseleko ngokubalulekileyo."
Isixhobo esilula ukufaka kwi-cab sibheka ubuso bomsebenzisi ukuba sibone naziphi na iimpawu zokukhathala okanye ukuphazamiseka, njengokwindawo yokulala. I-algorithm yokufunda ngokuzenzekelayo -yokufunda umatshini, basebenzisa ngokunxulumene nale nkcazo yenkcazo yolwazi ukujonga ukuba isilumkiso kufuneka siqaliswe okanye cha. I-OAS-LV isebenza kwiimeko ezikhanyayo kunye nemimnyama, kunye nezilingo ezigqityiweyo kunye / okanye izibuko zelanga.
I-hardware kwi-cab isoloko ixhunyiwe, kunye nedatha yesithuthi inokudluliselwa kwifu okanye kwindawo ethile yokubeka esweni. Oku kuvumela ukufumana izaziso ngexesha langempela, ukwenzela ukuba abaphathi kunye nabalawuli bangasebenzisa umgaqo-nkqubo wokungenelela kwaye bavumele uhlalutyo olongezelelweyo lwe-forensic. I-OAS-LV yenye yezisombululo ezininzi ezisezantsi kule iveki HxGN LIVE 2019, Inkomfa yedijithali yedijithali yedijithali yonyaka.
I-hexagon iguqula ukufunyanwa kweenkonzo zangaphantsi ngesisombululo esitsha se radar sokungena emhlabathini
I-hexagon AB yanikeza iLeica DSX, isisombululo esiphezulu sogxobhozo lwe-radar (GPR), ekufumaneni iindawo ezisetyenziswa phantsi komhlaba. Eyilwe ukwenza lula ukuchithwa kwedatha nokuzenzekelayo ukucwangciswa kwedatha, i-DSX ivumela abasebenzisi ukuba bakwazi ukubona, ukujonga imephu kunye nokujonga ngeso lwakhiwo lwezinto ezisemhlabeni ngokukhuselekileyo kunye nokwenene ngokuchaneka kokuma kweyona ndawo.
"Siyile iLeica DSX yabasebenzisi abanolwazi olulinganiselweyo lwe-GPR ekufuneka beyifumene, baphephe okanye bayenze imephu yoluntu phantsi kwemisebenzi yoluntu ngendlela elula, ekhawulezayo nethembekileyo, utshilo u-Ola Rollén, umongameli kunye ne-CEO ye Hexagon. "Ngesi sigqibo sokufunyanwa kokusetyenziswa, i-Hexagon izisa itekhnoloji ye-GPR kwiindawo ezintsha zomsebenzisi ukuvumela imisebenzi ekhuselekileyo kuwo nawuphi na umsebenzi ofuna ukumbiwa."
Isici esichaza i-DSX yisoftware yayo, i-DXplore, eguqulela izibonakaliso ezihambelanayo kwiziphumo ezinemvelaphi kunye nezilula. Ngokungafani nezinye izisombululo ze-GPR, abasebenzisi akudingeki babe namava ekutolika idatha ye-radar eluhlaza kunye ne-hyperbolas. I-DXplore isebenzisa i-algorithm enobuchule ukuze ivelise iimephu zesevisi zedijithali kwimaminithi, ibonise iziphumo ezifunyenweyo xa abasebenzisi besesensimini. Imephu ingaphinde ithunyelwe kwi-Leica DX yoMphathi weMephu, i-Leica ConX okanye enye isofthiwe esetyenziselwa ukusetyenziswa emva kwexesha kumashishini, okanye ukugqithisa idatha eyongezelelweyo.
I-hexagon yenza i-Leica BLK ichungechunge, ihlaziye i-revolutionizing the capture of reality for infrastructure, security and moving applications
I-hexagon AB yavelisa izongezo ezimbini ezitsha kwiingqungquthela zeLeica BLK. I Leica BLK2GO ngumncinci omncinci kunye noluhlu olupheleleyo olukhutshwe ngokubanzi lwe-imaging kwi-shishini, kwaye Leica BLK247 I-3D yokuqala yesikrini sokukhangela i-laser yokujonga ukukhusela okubonelela ngoncedo oluqhubekayo kwiiyure ze-24 zosuku, iintsuku ze-7 zeveki.
"Ukongezwa koluhlu lwe-BLK kuyaqhubeka iminyaka ye-Hexagon ye-20 egxile ekubuyiseleni ekubanjweni kwenyani," utshilo u-Ola Rollén, umongameli kunye ne-CEO ye-Hexagon. "Ezi sensors aziyonto intsha kuphela kubuchule bazo bobuchwephesha, kodwa kukwasebenza kwazo. I-Leica BLK2GO inokuthathwa naphi na, kwaye i-Leica BLK247 ayikaze ilale «.
Leica BLK2GO ibonisa ukuhamba ngaphambi kokuba kubonwe ukutshekisha indawo engaphakathi. I-scanner ye-laser idibanisa idibanisa ukuboniswa, i-LiDAR kunye ne-computer ye-computing ye-edge ukukhangela kwi-3D ngelixa ihamba, ivumela abasebenzisi ukuba babe bhetele kwaye basebenze ngokufanelekileyo ekuthatheni izinto kunye nezikhala. I-BLK2GO inezixhobo ezahlukeneyo zezicelo, ukusuka kwiiprojekthi zokuphinda zisetyenziselwe kumashishini wokwakha kunye nokuyila, ukuya kwindawo yokuhlola, ukujonga kuqala kunye ne-VFX yokusebenza kwamaphephandaba kunye nokuzonwabisa.
I-Leica BLK247 yenzelwe ukutyekwa okuqhubekayo kwi-3D, ukwandisa izixhobo zokukhusela izicelo. Umveleli unika ulwazi ngeemeko ngexesha langempela, ngokusebenzisa ikhompyutha ye-perimeter kunye ne-teknoloji yokufumanisa iteknoloji eyenziwe yi-LiDAR. Ngokusebenzisa ingqiqo yobuchule, i-BLK247 inokuhlukanisa phakathi kwezinto ezizinzileyo nezihambayo, ezifana nomntu ohambayo kwaye eshiya i-suitcase, kwaye achaze izisongelo zokukhusela ukunika izilumkiso ngexesha langempela, elindelekileyo kunye nezingalindelekanga. I-BLK247 iphucula kakhulu ulwazi malunga neemeko ngaphakathi kweendawo ezikhuselekileyo okanye ukhuseleko oluphezulu, ukuphelisa isidingo sokuba abantu bahlale bebeka iindonga zezikrini zokhuseleko okanye iipaneli zokulawula izakhiwo.
Ulwahlulo lwe-gexati yeHexagon longeza uMAApp Enterprise kunye noMAApp X kwinkqubo yemfundo
Icandelo le-Hexagon Geospatial liza kwenza iMaApp Enterprise kunye neMaAA X izixazululo zifumaneke ngeNkqubo yoLwazi lwezeMhlaba jikelele kwi-11 Juni ka-2019. Olu kongeza luya kunika abafundi ithuba lokuphucula ngcono nokuphunyezwa kwezicelo ze-geospatial, eziza kubanika inzuzo yobuchwepheshe kwimarike yemisebenzi yokhuphiswano.
"Njengoko ushishino lwe-geospatial lusiya kwizicelo zeshishini ezisekwe kwilifu, kufuneka sixhobise iiyunivesithi ngezixhobo ezifanelekileyo zokulungiselela abafundi ikamva," utshilo uMike Lane, Umphathi weMfundo yeHlabathi kwiCandelo leHexagon Geospatial «.
M.App Enterprise kunye neMAppApp X ivumela iiyunivesithi ukuba zisebenzise ithuba lobuchwephesha beshishini lika-Hexagon ukufundisa abafundi indlela yokusebenzisa idatha ye-geospatial nokusombulula iingxaki zangempela zehlabathi ». I-EnterApp ye-EnterApp liqonga lendawo yokugcina kunye nokuthumela i-Hexagon Smart M.Apps: usetyenziso olunobuchule oluhlanganisa umxholo, ukuhamba kwebhizinisi kunye ne-geoprocessing kumbono onxibelelanayo nonamandla wohlalutyo.
M.App X isisombululo se-geospatial esisisiseko esisekelwe efini, esenzelwe ukudala iimveliso kunye neengxelo ezivela kwimifanekiso, kuboniswe kwiplani yeshishini.
"Ngokwenza izicelo zesiko eMAppApp Enterprise, abafundi banokufunda indlela yokudibanisa iintlobo ngeentlobo zedatha esekwe kwindawo kunye nokusebenzisa amandla ohlalutyo lwangempela," utshilo uLane. "Ngokusebenzisa i-M.App X, abafundi abafuna imisebenzi kwizifundo zobuchule be-geospatial intelligence (GEOINT) kunye namacandelo ahambelana noko baya kufunda izakhono zokuqonda indawo kwaye bafumane ulwazi olufanelekileyo lokudala, lokulawula kunye nokuhambisa idatha evumela ukudityaniswa, ukuhlalutya kunye nokuhlangana Ulwazi lwendawo. . Siyavuya kakhulu ukubonelela ngala maqonga kuluntu lwemfundo «.
Iprogram yeMfundo iya kubabonelela ngabafundi nabafundi ngenani elikhulayo leesampula ekuqeqesheni kwabo, imizekelo, iividiyo kunye nokunye, ukusetyenziswa xa befunda kunye basebenze noMnuApp Enterprise kunye noMnuApp X.
Ukufumana ulwazi oluninzi malunga nokubandakanya uMnuApp Enterprise kunye noMAApp X kwikharityhulam yejebhsayithi kunye neengingqi zengcali, ujonge https://go.hexagongeospatial.com/contact-education-programs.
Post edlulileyo«Edlulileyo LandViewer - Ngoku ukufumana utshintsho kusebenza kwi-browser
Post Next #BIM-Ikhosi yeNzululwazi kubuGcisa boLwakhiwo nge-ETABSOkulandelayo "